साढे ९ हजार मत बदर | दिशानिर्देश कञ्चन साप्ताहिक
साढे ९ हजार मत बदर
अछाम, ०१ पुष । यसपालीको निर्वाचनमा मतपत्रहरु अप्ठ्यारा खालका भएकाले मतदातालाई मतदाता शिक्षा दिनुपर्नेमा मतदाता शिक्षा कागजी कारवाही र धनमा मात्र देखाइयो । सु.प.का कुनै पनि घरमा सरकारी तर्फबाट मतदान गर्ने तरिकाहरु सिकाएन र मतदान केन्द्रमा पनि भिडभाड हुने भएकाले मतदाता शिक्षा प्रभावकारी हुन सकेन ।
अछाम जिल्लामा साढे ९ हजार बढी मत बदर भएका छन् । अछाममा प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको पहिलो हुने निर्वा्चित हुने (प्रत्यक्ष) निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फ गरि यत्रो संख्यमा मत बदर भएका हुन् । प्रत्यक्षतर्फ २ हजार ९ सय ४८ र समानुपातिक तर्फ ६ हजार ७ सय २६ गरि ९ हजार ६ सय ७४ मत बदर भएका हुन ।
जिल्लाभरीमा पहिलो हुने निर्वा्चित हुने निर्वाचन प्रणाली (प्रत्यक्ष) तर्फ कुल खसेको मत ८६ हजार ८ सय ७४ मध्ये ३ दशमलव ५१ प्रतिशत मत बदर भएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय अछामले जनाएको छ ।
जसमा प्रतिनिधिसभाको क्षेत्र नं. १ मा ४३ हजार ३ सय ८० मत खसेकोमा १२ सय ९८ मत बदर भए । जुन सदर मत ४२ हजार ५ सय ८२ को ३ प्रतिशत हुन आउछ । यस्तै क्षेत्र नं. २ मा कुल ४२ हजार ८ सय ९४ खसेको मतमा ४ प्रतिशत मत बदर भएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका जिल्ला निर्वाचन अधिकारी प्रेमराज भट्टले बताउनुभयो । प्रदेशसभाको खसको मतमा २ दशमलव ३ देअी ५ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म मत बदर भएको उहाँको भनाई छ ।
बदर मतमा दुईटा चिन्हमा छाप लगाएको, ल्याप्चे लगाएको बढी भेटिएको भट्टले जानकारी दिनुभयो । प्रत्यक्षतर्फ सात नम्बर प्रदेशका अन्य जिल्ला भन्दा अछाममा मत बदर संख्या कमै भएको उहाँको भनाई छ ।
← देशलाई एकताको सुत्रमा बाध्नुपर्छ
२० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारी प्रतिबन्धित हुदै →